Madaxweyne Shariif oo magacaabay Guddiga wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Shariif oo magacaabay Guddiga wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland
Madaxweyne Shariif oo magacaabay Guddiga wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland
Muqdisho-(Berberanews)- Madaxweynaha dawladda Ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa maanta magacaabay Guddiga wadahaddalka Somaliland iyo Soomaaliya, ka dib markii Madaxweynaha Somaliland toddobaadkii hore magacaabay Guddi farsamo oo wadahadallada labada dhinac ka shaqaysa.
Guddiggan uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ka kooban tahay toddobo xubnood, sida ay sheegayaan Wararka ay Shabakadda Berberanews ka helayso magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya, waxaana Guddigaas hoggaaminaya Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka dawladda KMG ah ee Soomaaliya.
Guddigan Madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa ah shan xubnood oo golaha Wasiirrada Soomaaliya ka tirsan, kuwaasoo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Soomaaliya Cabdisamad Maxamuud Macallin Faarax, Arrimaha Dibedda, Diinta iyo Aw-Qaafta, Hawlaha guud, gaadiidka iyo guryeynta, Maaliyadda, laba xunood oo aan Wasiirro ahayn.
Guddiga ayaa waxa ay magaalada London ee dalka Ingiriiska kgaa qaybgali doonaan kulan Guddiga farsamo ee Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) magcaabay sida la sheegay, iyada oo Madaxweynaha Somaliland-na qoraalkiisa magacaabista ahaa uu ku sheegay in shanta Wasiir ee Guddiga farsamo uu u magacaabay kulan gogol-xaadh ah oo labada dhinac yeelanayaan kaga qaybgeli doonaan London.
Madaxweyanaha dowlada KMg Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inay wax wanaagsan tahay wadahadallada dowlada KMG Soomaaliya iyo Somaliland 21 sano oo ay Somaliland gaar u taagnayd ka dib ay maanta wadayeelanayaan.
Lama Sheegin xilliga uu qabsoomayo kulanka ugu horreeya oo ay labada Guddi ku wadayeelanayaan magaalada London ee waddanka Ingiriiska.
Previous articleFuritaanka Shirweynaha Sadexaad ee Golaha dhexe Xisbiga KULMIYE, Madaxweyne Silaanyo oo ka qaygalay iyo nuxurka khudbado laga jeediyay
Next articleMarkab u rarnaa Ganacsato Reer Somaliland ah oo Budhcad-badeeddu haysatay oo maanta soo gaadhay Dekedda Berbera